Ny fizahan-tany ao Jamaika dia manome valisoa ny mpilatsaka an-tsitrapo Olaimpika Japoney amin'ny fialan-tsasatra mahafinaritra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny fizahan-tany ao Jamaika dia manome valisoa ny mpilatsaka an-tsitrapo Olaimpika Japoney amin'ny fialan-tsasatra mahafinaritra
Vaovao Mafana • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • Sports • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Ny fizahan-tany any Jamaika dia manome valisoa ny mpilatsaka an-tsitrapo Olaimpika ao Japon.
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika Hon. Nanambara i Edmund Bartlett fa ny Birao Mpizahatany ao Jamaika miaraka amin'ny fanampian'ny mpiray antoka aminy dia hanolotra mpilatsaka an-tsitrapo Olaimpika Japoney, Tijana Kawashima Stojkovic, ary vahininy nofidiny, dia fandoavam-bola manokana ho any Jamaika. Ny dia, izay mandritry ny paroasy efatra, dia ahitana fitsidihana toerana manintona ary koa fijanonana amin'ny trano fandraisam-bahiny dimy.
Nanampy an'i Jamaikana Hurdler Hansle Parchment i Tijana tamin'ny Lalao Olaimpika tany Tokyo, Japon.
Teny an-dàlana ho any amin'ny hazakazaka amina lalao famaranana dia nandray tsy nahy ilay Shuttle Bus tsy namboarin'ireo mpikarakara hetsika i Parchmnet.
Nomen'i Stojkovic vola 10,000 yen i Parchment (90 $ mahery monja) handoavana ny fivezivezena mankany amin'ny Kianja Olaimpika any Tokyo ny talata 3 Jolay.
Natolotra an'i Stojkovic ity fanasana ity ho mariky ny fankasitrahana noho ny fanampiana ilay Jamaikana Hurdler sy medaly medaly volamena Olimpika, Hansle Parchment, ho any amin'ny Kianja Olaimpika ho an'ny hazakazaka amina lalao famaranana, taorian'ny nandehanany bus tsy marina rehefa handeha hamonjy ilay toerana.
Ny hariva lasa teo (18 aogositra) no nanambarana izany nandritra ny lanonana virtoaly iray iarahan'ny Birao Mpizahatany ao Jamaika sy ny Masoivohon'i Jamaika any Japon.
“Faly be aho manasa anao sy ny vahiny amin'ny karama rehetra fitsangatsanganana tany Jamaika hiaina ny antony mahatonga antsika ho 'Heartbeat of the World.' Hotsaboina ao amin'ny vondro-filoham-pirenena mpikarakara diamondra Diamond Club ao amin'ny Royalton any Negril ianao, sy ny fomba fijery kanto ary serivisy tsara an'ny hotely Half Moon sy Iberostar any Montego Bay, "hoy ny minisitra Bartlett.
“Ny fialan-tsasatrao dia hitondra anao sy ny olona vahininao mankany amin'ny Moon Palace any Ocho Rios, ary hahatsapa ny feon'ny Kingston ao amin'ny hotely AC Marriott ianao. Tsy mijanona hatreo izany, satria ianao koa dia hanana traikefa fitetezana toerana feno, izay hitondra anao amin'ny dia iray izay mampiseho ny fahafinaretan-tsainay sy ny kolontsainay mahafinaritra amin'ny zavatra maro hafa, ”hoy ihany izy.
Stojkovic dia nanome an'i Parchment 10,000 yen (90 $ mahery monja) handoavana ny fitaterana mankany amin'ny Kianja Olaimpika any Tokyo ny talata 3 Jolay ho an'ny hazakazaka amina lalao famaranana, taorian'ny nandehanany tsy nahy ilay Shuttle Bus diso nomen'ny mpikarakara hetsika. Vokatry ny fanampiana tsy misy fitiavan-tena nataony dia afaka tonga tao amin'ny kianja filalaovana ara-potoana i Parchment ary nametraka ny laharana faharoa tamin'ny semi-final ary nahazo medaly volamena tamin'ny famaranana.
“Te-hisaotra anao fotsiny aho ary milaza fa tena feno fankasitrahana aho noho ny fanampiana nomenao ahy tamin'ny Lalao Olaimpika sy ny namelany ahy hahazo medaly volamena. Nanao tantara [tao amin'ny media sosialy] aho ary nizara izany tamin'ny fianakaviako, namako ary mpanohana ahy. Hitan'izy rehetra ny fonao mahafinaritra sy tsara fanahy anananao… Manantena anao izahay mitsidika ny nosy tsara tarehy any Jamaika, mba hahafahanao manatona sy manana fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny fianakavianao, ”hoy i Parchment.
Stojkovic dia naneho fankasitrahana noho ilay fanasana ary nilaza hoe: “Tena faly aho tamin'ity… nanao izay vitako aho mba hanampiana ary tena faly aho amin'izany.”
“Ny fanapaha-kevitr'i Tijana tsy ho tia tena sy hanampy olon-tsy fantatra no tandindon'ny tsara indrindra momba ny zanak'olombelona. Ny fihetsika feno hatsaram-panahiny dia nibolisatra nanerana an'izao tontolo izao ary nampahatsiahy anay fa misy zavatra betsaka kokoa eto amin'izao tontolo izao ankehitriny… Ity fihetsika feno hatsaram-panahy ity dia maneho ny tsara indrindra amin'ny fandraisana vahiny japoney ary mankasitraka azy ny Jamaikana rehetra, ”hoy i Bartlett naneho .